HESHIISKA JABUUTI HAL BAAN KA LEEYAHAY
Yusuf Shabac II
Qofkasta oo u dhuun daloola siyaasada iyo taariikhda dalka Soomaaliya, wuu ku qoslayaa heshiiska ka dhacay dalka Jabuuti. Inta aan khaladka layga fahmin, waa aan taageersanahay heshiis, maxaa yeelay ilaah baa yiri heshiisku waa khayr. Qofkasta oo daawaday barnaamijkii (warlord next door) ee laga soo daayey channel 4ka dalka Ingiriiska isla markaana si toos ah loo soo geliyey shabakada Youtube, waxa uu ogaanayaa in aysan waxba gacan iyo gunti midna aysan inoogu jirin, oo aan nahay dad iyo dal la haysto. Dhanka dawlada kama imaan karo heshiis, aan ku dhisnayn maslaxad dal kale, mucaaradkuna kama imaan karo heshiis ay ka midaysan yihiin.
Waxa ka dhacay Jabuuti waxa ay ahayd siminaar Soomaalida lagu xusuusinayey in aysan dalkaan lahayn cidkale, in uu wadankii bur-bursan yahay, oo waxa laysku dayayey in xididkii wadaniga ahaa ee ka dhintay dagaal huriyeyaasha lasoo nooleyn karo. Maxamed Cawad Cabdalla oo ah wakiilka UNta waxa uu u sheegay wariyeyaasha caalamka in uu heshiiskaan ahaa kii afar iyo tobnaad laga soo bilaabo maalinkii la saarey Maxamed Siyaad Barre. In uu horumarona ay ku xiran tahay dadka Soomaaliyeed ee dhibaateysan.
Waxa uu Cabdilaahi uu saxiixay in Itoobiya laga saaro dalka sida uga dhaqsaha badan uguna dhow, meesha ay Maxkamadaha Islaamiga ogolaadeen in ay joojinayaan xabada ka socota Muqdisho.
Been haddii aan laysu sheegayn, Cabdilaahi Yusuf dalka kama saari karo Itoobiya iyo cidkale, Maxkamadahana ma joojin karaan dagaalkaan joogtada ah ee ka socda dalka meelo ka mid ah. Dad Cabdilaahi Yuusuf ugu dhow dhiig ahaan iyo siyaasad ahaanba ayaa sheegay in hubkii lagu tuurey Cabdilaahi Yuusuf markii uu aadayey dalka Jabuuti uu ka imaanaayey xaga xeradii ciidanka Asluubta halkaas oo ay haatan dagan yihiin ciidamada Itoobiya. Itoobiya in ay ka baqday culayska uga iman kara caalamka shaki maleh, taas waxa daliil u ah, in uu ninkii u talinayey dalka Soomaaliya Generaal Gabre uu tagay Jabuuti. Sidoo kale safiirka u fadhiya Itoobiya dalka Jabuuti, waa uu diidanaa in shirka laga saaro. Waxa taariikh cad ah oo meel walba ku qoran, in dadkii ay Itoobiya u dhiibtey Gobolada Soomaali Galbeed (ogaadeenya) ay noqdeen kuwo dalka ka baxsaday, kuwo ay laysay iyo kuwo ku raagey xabsiyadooda.
Sheekh Shariif Shiikh Axmed iyo kuwa isaga ku xiran waa danwadaag niyad fiican oo qunyar socod ah. Waa dad raba in ay dalka dawlad fiican ka dhalato oo waa dad raba in cadawga dalka laga saaro. Shiikh Xasan Daahir Uweys iyo qaybtiisana waa dad niyad fiican oo mayal adag, laakin labadan koox xalka isku si uma arkaan, kuwa uu qabiilku diloodey maahanee waxa ay ka siman yihiin in uu dalka ka dhasho dawlad Muslim ah oo uu ilaah raali ka yahay. Kuwa qunyar socodka ah, iyo kuwa mayalka adagba uma taliyaan dhalinta dagaalka ka wada dalka gudihiisa. Soo jug-jug meeshaadii joog maaha.
Sida ay ka dhawaajinayaan dad u dhuun daloola siyaasada Soomaaliya waxa ay sheegayaan, in Itoobiya laga saari doono dalka meelo ka mid ah, in lasoo kordhin doono ciidamada UNta. In mucaaradka aaminsan in lakala sooco diinta iyo siyaasada (secular) la siin doono jagada Ra�iisul wasaaraha, ka dibna Cabdilaahi Yuusuf marka uu wakhtigiisa dhamaysto loogu dari doono laba sano. Waxa intaa lagu daraa, in beesha uu ka dhashay Shiikh Xasan Daahir Uweys si gooni ah loola shiro, si ay markaa u joojiyaan taageerada ay u fidiyaan wiilashooda.
YUSUF SHABA (yusufshaba@yahoo.com)
MAXAA LOOGU DOWGALAY, AADAN XAASHI FARAX (CEYROW) ? Akhri...